Sabti 3 Bisha Afraad 2021
Jimco 2 Bisha Afraad 2021
Xirmooyinka Bariiska Songhua River Rice, waa badeecad bariis aad u sareysa oo hoos timaada Cuntada SOURCEAGE. Sida dabaaldega Shiinaha ee caadiga ah - Xilliga Gu'ga ayaa soo dhowaada, waxay qaabaynayaan iyada oo loosoosaaray shey bariis qurux badan oo hadiyado ah hadiyado la siinayo macaamiisha hadiyadihii xilliyada gu'ga, markaa naqshadeynta guud waxay ubaahan tahay inay ku celiso jawiga ciida ee munaasabadda gu'ga, iyagoo muujinaya astaamaha dhaqanka dhaqanka Shiinaha. iyo macno wanaagsan.
Khamiis 1 Bisha Afraad 2021
Gogosha Hadiyadda Cuntada Miisanka Leh
Arbaco 31 Bisha Saddexaad 2021
Gogosha Hadiyadda Cuntada Miisanka Leh Udiyaariyada Quduuska ah waa hadiyad raashin hadhuudh leh oo bartilmaamed u ah macaamiisha dukaamada waaweyn. Iyadoo la raacayo isbeddelka cuntada iyo cunnada ay noqdeen kuwa moodada leh, dhiirrigelinta mashruucu waxay ka soo baxday mawduuca moodada dharka 'Met Gala' ee diinta Katooliga. Jeremy Bonggu Kang wuxuu isku dayay inuu abuuro muuqaal indhaha ku haya macaamiisha dukaanka aadka u sarreeya, iyagoo adeegsanaya qaab qurux badan iyo qaabab qurux badan oo tusaalooyin ah si ay u matalaan dhaqanka hodanka ah ee farshaxanka iyo sameynta cuntada tayada sare leh ee Monasteries Catholic.
Booska Farshaxanka Guud
Talaado 30 Bisha Saddexaad 2021
Booska Farshaxanka Guud Wadada Dachuan ee Chengdu, West Bank ee Jinjiang River, waa waddo taariikhi ah oo xiriirisa burburka darbiga Chengdu East Gate City. Mashruuca, wadadda cusub ee Dachuan Lane ee taariikhda waxaa dib loo dhisay qaabkii hore ee dariiqa asalka ah, iyo sheekada jidkan waxaa loo sheegay rakibaadda farshaxan wadooyinka. Wax ka qabashada rakibaadda farshaxanku waa nooc ka mid ah warbaahinta loogu talagalay sii wadista iyo gudbinta sheekooyinka. Kaliya dib uma soo saari karto raadadka jidadka taariikhiga ah iyo wadiiqooyinka burburay, laakiin waxay sidoo kale bixisaa nooc ka mid ah heerkulka xusuusta magaalooyinka ee jidadka iyo dariiqyada cusub.
Isniin 29 Bisha Saddexaad 2021
Firo Dab-Damiska Dabka Axad 9 Bisha Shanaad
Phenotype 002 Jijin Sabti 8 Bisha Shanaad
Mangata Patisserie Aqoonsiga Muuqaalka Ee Rootida Jimco 7 Bisha Shanaad
Xirmada Daryeelka Maqaarku Xirmooyinka Bariiska Rakibaadda Farshaxanku Gogosha Hadiyadda Cuntada Miisanka Leh Booska Farshaxanka Guud Isgaarsiinta Muuqaalku